Home News Macalin Dugsi Qur’aan oo Walan-weyn lagu dilay iyo Xiisad Dagaal oo halkaa...
Macalin Dugsi Qur’aan oo Walan-weyn lagu dilay iyo Xiisad Dagaal oo halkaa kataagan
Wararka inaga soo gaaraya Degmada Walan-weyn ee Gobolka Sh/Hoose ayaa waxa ay Sheegayaan in halkaa ay kataagantahay xiisad Dagaal oo u dhexayso lobo Maleeshiyo Beeleed oo halkaa wada dega.
Xiisadaa ayaa waxa ay kadhalatay kadib dil Xalay loo gaystay Macalin Dugsi Qur’aan oo kamid haa Dadka deegaanka waxaana uu ahaa Macalin aad looga garan ogaa Magaalada Walan-Weyn oo Dilku uu kadhacay.
Macalinka ladilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray naxariistee Cismaan Cirbad, waxaana Dilka kadib waxaa goobta isga baxasaday Shaqsiyaadkii Dilkaa ka dambeeyay.
Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in dilka Macalinka uu la xiriiro Aano qabiil, iyadoona saakay lasoo sheegayo in xiisad ay ka taagan tahay gudaha Degmada Wanla-weyn ee Shabeellaha Hoose.
Weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay maamulka Degmada Wanla-weyn oo ay uga hadlayaan xiisada iyo dilkii xalay ka dhacay halkaas, kaasi oo salka ku haayo aanooyin qabiil.